Kedu ihe kpatara igwe ji acha anụnụ anụnụ ma ọ bụghị agba ọzọ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe kpatara igwe ji acha anụnụ anụnụ ma ọ bụghị agba ọzọ?
Claudi ego | | Ciencia
Nye jụtụbeghị ma ọ bụ jụọ ajụjụ a? Ha nwere ike ịgwa anyị banyere… "Ọ bụ ngosipụta nke oke osimiri!" Ọ na-atọ ọchị, ọ bụrụ na anyị ajụọ ajụjụ a azụ, azịza a ma ama maka ihe mere osimiri ji acha anụnụ anụnụ na-abụkarị n'ihi na elu igwe na-acha anụnụ anụnụ. Onwere ihe adabaghi ​​nke oma? N'ezie, ịkwesighi ịchọ onye "na-ese" ihe, mana ebe agba a sitere. Ihe na-acha ọcha nke anyanwụ si na Sun na-emekọrịta ihe na mbara igwe, bụ isi ihe kpatara ya.
Mgbe ụzarị ọkụ na-agafe n'ahụ uzo ma ọ bụ nke translucent, nke ọ bụla agba ndị na-eme ka ìhè na-acha ọcha na-ekewapụ n’otu akụkụ. Na-adabere mgbe niile na ọkara ha gafere, ntụziaka na ọdịdị ga-agbanwe. Igwe ocha nke Anyanwu weputara na obere uzo nke ebili mmiri nile nke mejuputara onodu electromagnetic. Dị agba dị ka egwurugwu. Iji hụ nke a agbaji agba, o zuru ezu iji mee ka a ray nke ìhè gabiga a prism.
1 Decomposing agba nke ìhè
2 Ee, elu igwe na-acha anụnụ anụnụ n'ehihie. Ma ọ bụghị mgbe niile! Nkedo?
2.1 Ọ na-adabere mgbe niile na oke ntụ na ájá kwụsịrị na ikuku
Decomposing agba nke ìhè
Dika agba na-emebi, viole na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ dị mkpụmkpụ karịa ndị na-acha odo odo (karịa etiti) ma ọ bụ oke ya, na-acha uhie uhie, na ogologo ogologo. Nke ahụ bụ ihe na-akpata ụdị agba agba a. Mgbe ụzarị anyanwụ na-agabiga na mbara igwe, ha na-esi n’igị mmiri, uzuzu, ntụ, wdg. N'okwu a, a na-eme ka ụzarị ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ ruo n'ókè ka ukwuu karịa agba odo na acha uhie uhie.
Rayszarị a, na-adakọ mgbe niile na ikuku ikuku nke jupụtara na iru mmiri, uzuzu na ntụ, na-ebute mgbanwe mgbe niile na trajectory. A maara usoro a dị ka "ịgbasa." Nke a bụ ihe na-akpata ụcha uhie ahụ. Site na ịgbasa okpukpu anọ karịa agba uhie n'ihi mkpụmkpụ mkpụmkpụ, ọ bụ ihe na-eme ka anyị nwee mmetụta na-acha anụnụ anụnụ n'ozuzu ya nakwa na ọ naghị elekwasị anya n'otu isi.
Ee, elu igwe na-acha anụnụ anụnụ n'ehihie. Ma ọ bụghị mgbe niile! Nkedo?
Nkọwapụta nkọwa nke ndo dị iche iche | Gamavision
Ụzarị nke na-acha odo odo na nke uhie uhie bụ ndị na-abụghị. Ogologo ogologo ha dị ogologo na-eme ka ha gbasasịa. Site na ịga n'ihu n'ahịrị kwụ ọtọ, ọ na-eme ka agba ndị a jikọta, na-enye agba oroma. Dabere na oge nke ụbọchị anyị nọ na ya, agba nke igwe, ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịdị iche. Ihe anyị nwere ike ịhụ mgbe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ mgbe anyanwụ dara, anyị na-ahụ Anyanwụ na nso oke osimiri ma ọ bụ mbara igwe.
Igwe ọkụ dị ebe a ga-agabiga oke oke nke ikuku. Mkparịta ụka a na-amanye nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmiri vapo mmiri, ụmụ irighiri mmiri, ájá, wdg, na-agwụ ike na-esote ihe ndị a. A na-agbasasị ọkụ nke ìhè na-acha anụnụ anụnụ na violet. Ọkụ ndị dị nso na ụdị uhie dị iche iche, yana trajectories kwụ ọtọ, na-aga n'ihu, na-enye anyị nke ahụ oroma na agba ọbara ọbara.
Ọ na-adabere mgbe niile na oke ntụ na ájá kwụsịrị na ikuku
Ike nke acha uhie uhie nke a na-ahụ na mbara igwe mgbe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ mgbe niile na-adabere na ego nke ntụ na ájá kwụsịtụrụ na ikuku, ma e wezụga mmiri vepo. Nke ahụ bụkwa isi ihe kpatara na mgbe enwere ntiwapụ ma ọ bụ ọkụ dịka ọmụmaatụ, ọnụọgụ ntụ na ntụ na-abawanye, na-emekwa ka a hụ agba ndị ahụ nke ọma.
A na - ahụ ezi ihe nlere nke ihe a na Mars. Na mgbakwunye, ugbu a ọ ga - emeri ya, ọ na - ewe ihe dị mkpa iji kọwaa ihe kpatara mbara ala na - acha uhie uhie. Ọ bụ kpomkwem n'ihi na "ego nke ikuku" o nwere, na ọ bụ nnọọ mma. Na mgbakwunye, n'adịghị ka ụwa, nke kachasị ikuku oxygen, ebe a ka ọ bụ carbon dioxide. Tinyere nnukwu igwe oxide, na oke ikuku nke na-eweli ájá, na-eme Mars ụwa mbara ala, n'adịghị ka ,wa, ụwa anyị na-acha anụnụ anụnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe kpatara igwe ji acha anụnụ anụnụ ma ọ bụghị agba ọzọ?
Nnukwu data na ọgụgụ isi maka njikwa mmiri ka mma
Mmetụta nke ugwu mgbawa Antarctic na-agbawa